Thit Htoo Lwin: 1/22/12 - 1/29/12
19/05/13 - 26/05/13 (202)
ကောင်းဟိန်းစက်သုံးဆီ ပုဂ္ဂလိကအရောင်းဆိုင်နှင့် သိုလှောင်ရုံ မြို့ ပြင်ထုတ်ပေးပါ (ပေးစာ)
သို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများသိရှိစေရန်ပြောပေးပါခင်ဗျား မန္တလေးတိုင်း၊မိတ္ထီလာခရိုင်၊သာစည်မြို့ နယ်ရှိ ကောင်းဟိန်းစက်သုံးဆီပုဂ္ဂလိကအရောင်းဆိုင်နှင့် သိုလှောင်ရုံသည် မိတ္ထီလာတောင်ကြီးကားလမ်းနှင့်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတို့အများဆုံး သွားလာရာ အ.ထ.က (၁) လမ်းထောင့်တွင်လူနေအိမ်တို့နှင့်စည်ရိုးသားဖြားပြီတည်ရှိနေပါသည်။မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်၊လ.၀.ကရုံးတို့နှင့်လည်းကိုက်(၁၀၀) မသေးဘဲ တည်ရှိနေပါသည်။ ယခင်က ဂါလံ ၃၀၀၀ခန့် ၀င်ဆံသည့် တိုင်ကီ ၄လုံးနှင့်သိုလှောင်ရောင်းချနေပါသည်။ယခု (၇.၁.၂၀၁၂) နေ့က ဂါလံ ၄၀၀၀ခန့် ၀င်ဆံသည့် တိုင်ကီနှစ်လုံးကိုထပ်မံသိုလှောင်ရန် လုပ်ကိုင်လာပါသည်။ကိုယ်ဇာတိအရပ်သားမဟုတ်သောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး၊မီးသက်ဦးစီး၊စည်ပင်လူကြီးတို့က မျက်စိမှိတ်ခွင့်ပြုနေ၍ မြို့နေလူထုမှာ မီးဘေးအန္တရာယ်ကို အစဉ် စိုးရိမ်နေရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖြင်းအလို့ငှာဤဆီဆိုင်ကြီးနှင့်သိုလှောင်ရုံကို မြို့စွန်သို့ ထုပ်ပေးပါရန်တောင်းခံအပ်ပါသည်။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ပြည်သူတွေအစဉ်စိုးရိမ်နေရသောကြောင့်ဤစာကို အများပြည်သူတို့သိရှိအောင် မြို့နေလူထုတစ်ယောက် အနေနဲ့ လေးစားစွာတောင်းခံအပ်ပါသည်။သာစည်သားလေး ပြည့်ဖြိုးဟန်
1/28/2012 11:55:00 PM
ရွှေနံသာလယ်သမားများ အခက်တွေ့နေ ဦးခင်ရွှေ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီနဲ့ ဥက္ကဌဟောင်း ကို တရားစွဲ
ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဦးခင်ရွှေနဲ့ ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီကို တိုက်ခိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူး ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အစိုးရကိုလည်းတိုက်ခိုက်နေကြတာ
မဟုတ်ဘူး ။အမှန်တကယ် လိမ်ညာလှည့်ဖြား - ရပ်ကွက် ဥက္ကဌအဟောင်း ဦးထွန်းနိုင် နဲ့ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီကပူးပေါင်းပြီး မြေယာမတရားရယူမှုကြောင့် နစ်နာသူတောင်သူတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တယ် ။ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲ ပေတရာကုမ္ပဏီဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့ နစ်နာမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ် ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အစိုးရမဟုတ်ဘဲ -ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဖြစ်နေရင်လည်းနစ်နာမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင် ရမှာဘဲ။စစ်သားလူထွက် အစိုးရမဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသားလူထွက် အစိုးရဖြစ်နေရင်လည်း ကျနော်တို့ လယ်သမားတွေ နစ်နာမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ် ။နစ်နာသူတွေထဲမှာ ကျနော့်အမျိုးတွေမပါသလို - နောင်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက် ကြိုတင်မဲဆွယ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး( အဲသလိုအထင်ခံရပြီးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ တန်ဖိုး ကျမှာစိုးလို့ ကျနော်သစ္စာဆိုတယ် ။နောင်အစဉ်အဆက် နေမျိုးဝေ မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲမှ မ၀င်ပါ ။ဤစာကို အားလုံးမှတ်တမ်းတင်ပေးကြပါ )ဒီနေ့ ( ၂၈ . ၁. ၂၀၁၂ ) ညနေ ၅း၃၀ ) မှာ ရွှေနံ့သာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် စာနဲ့ ဗီဒီယို အခွေပေးခဲ့ပါတယ် ။ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေနဲ့ တည်ဆဲ ၁၉၅၃ ခု နှစ်လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးဥပဒေကို မသိပါ ။ ၁၉၆၃ ခု နှစ် သီးစားချထားရေးဥပဒေပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမသိပါ ။ သူ လုံးဝဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိကြောင်း ပြောပါတယ် -ဒီနေ့ ည ၇ နာ၇ီခန့်မှာဘဲ ရွာသား ၃၀ လောက်နဲ့ ဇေကမ္ဘာ မန်နေဂျာဦးမြင့်ဇော်ကို သွားတွေ့ပါတယ် ။ကန်သင်းတွေ မြေတူးစက်နဲ့ မထိုးဖို့ ညှိကြည့်ပါတယ် ( နေ့လည် ကတည်းက အခုထိဆက်တိုက် ဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးနေပါတယ် ) ။ လုံးဝ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ကန်သင်းတွေကိုထိုးနေတယ်လို့ဖြေပါတယ် ။ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ဥက္ကဌဟောင်း ကို တရားစွဲဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါပြီ ။
နိုင်ငံအ၀ှမ်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မြို့ နယ်ရုံးဖွင့်လှစ်ပွဲများ (ဓါတ်ပုံ)
စစ်ကိုင်းတိုင်း ချောင်းဦးမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်ပွဲ မကွေးတိုင်း မင်းဘူးမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်ပွဲ
ဧရာဝတီတိုင်း ကျုံပျော်မြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ရုံးဖွင့်ပွဲ
ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်ပွဲ
တနင်္သာရီတိုင်း ကျွန်းစုမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်ပွဲ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်ပွဲ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်ပွဲ
ဓါတ်ပုံ - NLD
1/28/2012 11:30:00 PM
ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း
လွတ်လပ်ရေးပိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် သံအမတ်ကြီးဟောင်း သီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည်တို့မှ 1945ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ငယ်စဉ်က မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာများကို ရန်ကုန်မြို့ စိန့်ဖရန်စစ် (St. Francis Convent) ကျောင်း (တာမွေ)နှင့် Methodist English High School
(ဒဂုံ)တို့တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး အဆင့်မြင့် ပညာရပ်များကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် စိန့်ဟျူခ်ျကောလိပ် (St. Hugh's College)
တွင် သင်ယူခဲ့ပြီး အမ်အေ (M.A) မဟာဝိဇ္ဖာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
1971ခုနှစ်တွင် ဘူတန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးအရာရှိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ 1972 ခုနှစ်၌ နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘတ်ဂျက်ဌာန အကြံပေးကော်မတီတွင် လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုနှစ်တွင် ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားနှစ်ဦးဖွားမြင်ခဲ့သည်။
ဧည့်ပညာရှင်အဖြစ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်၊ အရှေ့တောင်အာရှ သုတေသနဌာနသို့ သွားရောက်ခဲ့၏။ 1987-1988ခုနှစ်အထိ Simla ရှိ အိန္ဒိယအဆင့်မြင့်ပညာ ဆည်းပူးရာဌာန၌ သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့၏။
ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးတွင် လူထုခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ခဲ့ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နိုဗယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအပါအ၀င် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုတံဆိပ်မြောက်များစွာ ရရှိခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ချီးမြှင့်သော "Commandeur de Legion d' Honour"ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ 2012ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး မှတ်ပုံတင်သောအခါ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်အပ်နှင်းခြင်းခံရသည်။
(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ေ၀၀ည့် ဒီလှိုင်း D.Wave ဂျာနယ် အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂)တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
1/28/2012 07:14:00 PM
အဲဒီဟောပြောပွဲပီးရင်တော့ အောက်ရေဖြူကနေ ထားဝယ်ဖက်ကိုပြန်လာပီး ကမြောကင်းတံတားအနီး သို့မဟုတ် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်အနီးရှိ သောကြာပြင် လမ်းဆုံမှာ
နောက်ထပ်လူထုဟောပြောပွဲတခုလုပ် မယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီပွဲပီးရင် မောင်းမကန်ကမ်းခြေကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပီး အဲဒီမှာ လူထုဟောပြောပွဲ
လောင်းလုံးမြိုနယ်မှ လှပတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေတခု အခု ထားဝယ်ခရီးစဉ်ဟာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမ-ဆုံး ရန်ကုန်မြိုပြင်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပီး ထားဝယ်ခရီးစဉ်ပြီးရင် မန္တလေးဖက်ကို ဆက်သွားမယ်လို့ ပါတီဝင်တွေဆီကနေ သိရှိရပါတယ်။ ။
1/28/2012 07:04:00 PM
အစိုးရနှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီး
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မြို့တော်၊ တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်အစိုးရရုံးတွင် အစိုးရနှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ( SSPP )/ ရှမ်းပြည်နယ်တပ်မတော်-တောင်ပိုင်း(SSAN)တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြာင်း The Messenger ဂျာနယ်သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
"၁၉၄၈ ကတည်းကပြည်တွင်းစစ်ကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ အဆုံး သတ်ရပါမယ်၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာအပေါ်ယံဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး နက်နက်နဲနဲနဲ့ကိုဖြေရှင်းမှရမှာပါ ဒီမှညှိလို့ရတာတွေ ကိုညှိပြီး ညှိနှိုင်းလို့မရသေးတာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်သွားရမှာပါ”
ဟု ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ( SSPP ) နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း
( SSAN ) တို့၏ နာယက ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်က ပြောသည်။
သတင်း-ဓါတ်ပုံ - မက်စင်ဂျာဂျာနယ် (ဖေ့စ်ဘုတ်)
အစိုးရနှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ဆွေးနွေး
တောင်ကြီး၊ ဇန်န၀ါရီ- ၂၈
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP) တို့ ယနေ့တောင်ကြီးမြို့တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးအောင်သောင်းခေါင်းဆောင်ပြီး ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးမောင်မောင်သိမ်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်သော ဒုတိယခေါင်းဆောင်
ဦးဝင်းထွန်း၊ ဦးအုန်းမြင့်စသော ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည်။ ထူးခြားမှုမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဒုတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမှုတွင် လွတ်မြောက်ခဲ့သောရှမ်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖြစ် ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီမှ ပါတီဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးစ၀်ထီးတိုင်းခေါင်းဆောင်ပြီး အဆင့်မြင့်တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သည်။ အစိုးရနှင့် SSPP တို့မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းက အပြန်အလှန်ကမ်းလှမ်းထားပြီး ယနေ့တွင် တောင်ကြီးမြို့၌
တရားဝင်တွေ့ဆုံကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် နှစ်မျိုးစလုံးမှာပင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးရန်အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု သိရကြောင်း အစည်းအဝေးသို့ရောက်နေသော 7Day News သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ ယနေ့နံနက်
၁၁း၀၀ နာရီတွင်တောင်ကြီးဟိုတယ်၌ နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူများ တစ်နာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် ထမင်းစားနားပြီး ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တောင်ကြီးပြည်နယ် အစိုးရရုံးတွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ဆက်ဆံရေးရုံးခန်းထားရှိရေး၊ ဒေသ၀င်ထွက် ခွင့်ပြုရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဒေသသတ်မှတ်ပေးရန်တို့ကို အဓိကဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရနှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ(SSPP)တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့
သတင်းသွားရောက်ရယူနေသော 7Day News သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးတွင် ယနေ့ညနေ ၄ နာရီခန့်တွင် နှစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူများက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
1/28/2012 06:49:00 PM
တစ်ခေတ်တစ်ခါက လက်ကိုင်ဖုန်းများ မျက်နှာပန်းပွင့်စဉ် အခါသမယကိုပြန်လည်သတိရမိသည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ကျော်လောက် ဖြစ် နိုင်သည်။ ဟန်းဖုန်းကိုင်သော လူတန်းစား၊ ဖုန်းဝယ်သော လူတန်းစားသည် အနည်းအကျဉ်းမျှသာရှိသည်။ဖုန်း လျှောက်လွှာသည် ထီဆုကြီးသဖွယ် ဖြစ်နေ၏။ထိုစဉ်က ဟန်းဖုန်း သတင်းပါသည့် ဂျာနယ်သည် အရောင်းသွက်သည်။မှတ်မှတ်ရရ
ဖြစ်နေသည်မှာ ဂျာနယ်တစ်ခုတွင် ဖတ်ရသည့် အကြောင်းအရာပင်။ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင် မင်းသား ဖုန်းခိုးခံရသည့် သတင်းကို ပေါ့ပ်ဂျာနယ် တစ်စောင်တွင် ဖတ်ခဲ့ရသည်ကို အမှတ်ရမိသည်။နိုင်ငံကျော် မင်းသားလည်းဖြစ်ပြန်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းသည်လည်း ပျိုတိုင်းကြိုက် နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်နေပြန်ဆိုတော့ကား လက်ကိုင်ဖုန်း အခိုး ခံရသည်ကပင်သတင်းဖြစ်နေချေသည်။နောက်အကြောင်းအရာ တစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။ကျွန်ုပ်နှင့် အမျိုးချင်း မနီးတနီး ဂျီးတော်ကြီးသည် ဖုန်းလျှောက်လွှာဖြင့် ဖုန်းလျှောက်လိုက်လေရာ ဖုန်း ရလိုက်လေသည်။ထိုရသော ဖုန်းကို ရောင်းလေသည်။ရောင်းရငွေ၏ ၁၀ ပုံ တစ်ပုံကို သူ၏ ဂျီးတော်ကြီးအား ကန်တော့၏။ကန်တော့ငွေ မည်မျှ ထင်ပါသနည်း။ ကျပ်ငါးသိန်းဖြစ်ပါသည်။ထိုစဉ်က ရွှေဈေးဘယ်လောက်မှ မရှိသေး။ ကျန်တစ်ဦးလည်း ရှိသေးသည်။သူကတော့တစ်မျိုး ဖုန်းရောင်းရငွေ ကျပ် သိန်း ၅၀ ကို မြေတစ်ကွက် ၀ယ်သည်။ထိုမြေကွက်သည် အခုချိန်တွင် ကျပ် သိန်း လေးရာထိရနေသည်။ ဒီလိုကျတော့ လည်း မုဒိတာပွားစရာ။ထိုစဉ်က လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဖုန်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုပါ ထည့်သွင်း ဆုံးဖြတ်ရသော ခေတ်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။နိုင်ငံခြားသွားရန် ပိုင်ဆိုင်မှု ပြလျှင် မြေပိုင်ဆိုင်မှုအပြင် ဖုန်းပိုင်ဆိုင်မှုပါ ပြသရလေသည်။သူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်က ထိုသို့ နိုင်ငံခြားသွားရန် ပိုင်ဆိုင်မှု ပြသည်မှာ မလုံလောက် သဖြင့် ဟန်းဖုန်း သုံးလုံးခန့်ပိုင်ဆိုင်မှု ပြခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။စာရေးသူ၏ မိဘများပင် တစ်ခေတ်တစ်ခါက အလွန်ပင် ငွေရလွယ်လှသော ဖုန်းအငှားဆိုင်ပါ ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ထိုစဉ်က ဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်က ရသော ငွေသည် မိသားစုတစ်စုစားဝတ်နေရေးအတွက် အတော်လေးအထောက်အကူ ဖြစ်သည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ဖုန်းရှားပါးစဉ်က ကျောက်ဝိုင်းအနီးက ဖုန်းဆိုင် တစ်ဆိုင်၏ တစ်ရက်တစ်ရက် ၀င်ငွေမှာ ကျပ် ၅၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ကြားဖူးသည်။တချို့ကလည်း အဆက်အသွယ် ဖြင့် ဟန်းဖုန်းများလျှောက်၊ ထို့နောက် အငှား ချစားကြသည်။စာရေးသူတို့
မိသားစု လိုင်းဖုန်း စကျတော့ အခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုး၊ ပထမဆုံး အသုံးပြုခွင့်ကျသော ဖုန်းတို့သည် နှစ်ဂဏန်းဖြင့် စတင်ပြီး အန်နာ လော့စနစ်ဖြစ်သည်။နောက်ပိုင်း အန်နာ လော့ခ် စနစ်ဖုန်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖုန်းသို့ ပြောင်းရ၊ ထို့နောက် သိပ်များမကြာမီ ကြိုတင်ငွေစနစ် ပြောင်းရ လိမ့်ဦးမည်။စာရေးသူတို့ ဟန်းဖုန်း စကိုင်စဉ်က ဖုန်းတစ်လုံးဈေးသည် ရွှေတစ်ကျပ်သား ၀န်းကျင် ငါးသိန်းကျော်ဈေး ဖြစ်သွား ခဲ့သည်။ယခုဆိုလျှင် ရွှေဈေးသည် တစ်ကျပ်သား ခုနစ်သိန်းကျော်သွားပြီ။ဖုန်းက အနိမ့်ဆုံး သုံးသိန်းဖြစ်လာမည်မှာ သေချာသည်။ငါးထောင်တန် ဖုန်းဆိုလျှင်တော့ စာရေးသူဖုန်းမ၀ယ်ခဲ့ဘဲ ငွေတိုးပေးစားတာက ပိုကိုက်မည်ဟု တစ်ခါတစ်လေ ရင်ထုမနာ ဖြစ်ရသည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ ကြိုးဖုန်းများ ပေါပေါများများ ဖြစ်လာခြင်းကို စာရေးသူပျော်ရပါသည်။ဒီထက်ပိုပေါများပြီး နည်းပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားကာ လိုင်းကောင်းလျှင်တော့ ပိုပြီးပျော်ရမည်ထင်သည်။ဖုန်း လိုင်းတို့အပြင် အင်တာနက်လိုင်း အမြန်နှုန်း ကောင်းလျှင်မူကား စာရေးသူတို့ အတွက် အပျော်ဆုံးဖြစ်မည်ထင်၏။
1/28/2012 06:27:00 PM
မန္တလေးခရိုင်ရှစ်ခုတွင် အမှိုက်စွန့်၊ ဟွန်းတီး၊ ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်း အရေးယူမည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရိုင်မြို့ရှစ်မြို့တွင် သန့်ရှင်းလှပစေရန်အတွက် အများပြည် သူစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် ကိစ္စပ်များဖြစ်သည့် ယာဉ်ပေါ်မှအမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ကျယ်လောင်စွာဟွန်း တီးခြင်းနှင့် ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းများကို လာမည့် ဖော်ဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ တိုင်းဒေသကြီးယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ယင်းကော်မတီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရ သည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်ပေါင်း ၃၁ မြို့နယ်ရှိပြီး မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ ကျောက် ဆည်၊ မိတ္ထီလာ၊ မြင်းခြံ၊ ညောင်ဦး၊ ရမည်းသင်းနှင့် နေပြည်နော် စသည့်ခရိုင်ရှစ်ခုရှိကာ ယင်းခရိုင်များတွင် အဆိုပါ အရေးယူမှုကို ဆောင်ရွက်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ အရေးယူမည့်ကိစ္စရပ်များကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသိပညာပေးကာလအဖြစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ် ထားကာ ယာဉ်လိုင်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက လက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေပြီး ခရီးသည်များကို ဇန်န၀ါ
ရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ သတိပေးနှိုးဆော်ခြင်း၊ ယာဉ်များပေါ်တွင် သတိပေးစာတန်းများ ကပ်ခြင်းတို့ကိုပြု လုပ်နေကြောင်း၊ လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
The Voice Weekly Journal သစ်ထူးလွင်
1/28/2012 06:15:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထားဝယ်ခရီးစဉ် အချိန်ဇယား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြိုဆိုရေး ထားဝယ် လှုပ်ရှားမူ
ဟင်္သာတ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးဖွင့်လှစ်ပွဲ (ဓါတ်ပုံ)
ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ မနက် မှာ ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့ နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးကို ဖွင့် လှစ် လိုက်ပါတယ်။
1/28/2012 12:20:00 PM
အဖွဲ့ချူပ် ပါတီလူငယ်ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော်ရှိ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များ တည်းခိုနေရာ ဖောက်ထွင်းခံရ
ဖြူးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အဖွဲ့ရံပုံငွေအတွက် ဈေးရောင်းပွဲတခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံ-NLD)
ဖြူးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် ပါတီလူငယ်ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတော်ရှိ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များ တည်းခိုနေရာကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခံရသဖြင့် ကျပ်ငွေ ၄ သိန်းအပါအ၀င် ကင်မရာတစ်လုံးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယို တိတ်ခွေများ ပါသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြူးမြို့နယ်၊ ကညွတ်ကွင်းမြို့နယ်၊ ဇေယျဝတီမြို့နယ်နှင့် ညောင်ပင်သာမြို့နယ်အတွင်းက ကျေးရွာအဆင့်အထိ ပါတီအဖွဲ့ဝင်သစ်များ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံများအားလုံးလည်း ၄င်းမှတ်တမ်းကင်မရာများတွင်ပါသွားရာ အဆိုပါ ဓါတ်ပုံများ ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်သရုပ်ဆောင် တစ်လအတွင်း စီစဉ်မည်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သရုပ်ဆောင်ရန် လျှောက်ထားသူ Photo: ပြည်မြန်မာဂျာနယ်
Modern News Journal — ဗိုလ်ချုပ်အတ္ထုပ္ပတ္ထိဇာတ်ကားမှာ ဗိုလ်ချုပ်နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ လျှောက်လွှာလက်ခံရေးကို တစ်လအတွင်းပြု လုပ် မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်က “ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လျှောက်လွှာတွေလက်ခံတော့မှာပါ ။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေရှိရင် လာရောက် လှူလို့ရပါတယ်။ ကော်မတီရုံးခန်းဖွင့်ပြီးတာနဲ့ တစ်လအတွင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့တူတဲ့လူ ရွေးချယ်ဖို့ လျှောက်လွှာတွေစတင်လက်ခံတော့မှာပါ” လို့ပြောပြပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်သူတွေကို တစ်လသတ်မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာကိုရောင်းချမှာမဟုတ်
ဂျာနယ်တို့ သတင်းစာတို့မှာကြေငြာပြီး၊ လျှောက်ချင်တဲ့သူတွေက အဲဒီလျှောက်လွှာပုံစံကို လက်ရေးမူနဲ့ကူးယူပြီး၊ ကော်မတီရုံးခန်းကိုလာရောက်လျှောက် ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Favorite News Journal — နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ (၄၀၁) ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ ဦးခင်ညွှန့်( ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်)သည် ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေထူထောင်သော မြရိပ်ညိုဖောင်ဒေးရှင်းတွင် နာယကအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟူသော အင်တာနက်သတင်းများ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်၌ ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း တစ်မုဟုတ်ချင်း သတင်းပျံနှံသွားခါ
ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်နံနက် ၁၁နာရီခွဲခန့်တွင် ဦးခင်ညွှန့်နေအိမ်(မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ န၀ဒေးလမ်းသွယ်) သုို့ သွားရောက်၍မေးမြန်းခွင့်တောင်းခံခဲ့သည်။ ဦးခင်ညွှန့်၏ နေအိမ်ခြံဝင်းတံခါး၌ ဦးကျော်ဝင်းဆိုသူကလက်ခံ၍ ၄င်းသတင်းဖြစ်နိုင်ခြေမရှိကြောင်းနှင့် ဦးခင်ညွှ့န့်အားသွားရောက်မေးမြန်းပေးမည်
ဆိုကာ ဦးခင်ညွှန့်၏အိမ်အတွင်းသို့ ၀င်သွားခဲ့ပြီ်းနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကာ ၄င်းသတင်းနဲ့ပတ်သက်၍ အတည်ပြုချက်ရရှိရန် ဖုန်းနံပါတ်———- ကိုပြောသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်ညနေ၆နာရီတွင် ယင်းဖုန်းနံပါတ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ပြန်လည်အဆက်သွယ်ရရှိသောအခါ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်က—–ဖြစ်ကြောင်း ပြော
ဆိုပြီး´´ ၄င်းသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လောလောဆယ်၌ ဘယ်မီဒီယာနှင့်မျှ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း မြရိပ်ညိုဖောင်ဒေးရှင်းမှာ´နာယက´အဖြစ်
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဆိုခြင်းမှာ ´အမှား´ဖြစ်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းသတင်းမှာ လုံးဝ မဟုတ်၊မမှန်ပါကြောင်း၊ သတင်း မှားနေကြောင်း၊´´ဦးခင်ညွှ့န့်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ၊ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်က ဖေးဗရိတ်သတင်ဂျာနယ်သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ယင်းသတင်းနှင့်ပတ်သက်သော ´´မြရိပ်ညိုဖောင်းဒေးရှင်း´´၏ Website ဖြစ်သည့် http;/www.myayeiknyo.org
ကိုဇန်န၀ါရီ ၂၆ရက် နံနက်၁၁ နာရီခွဲတွင် ဖွင့်ကြည့်ရာ Error ပြနေခဲ့ပြီး၊ Face book ရှိ မြရိပ်ညို ဖောင်ဒေးရှင်း account တွင်မူ ထိုသတင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာကိုမတွေ့ရဘဲ၊ ဖော်ပြပါပုံကိုသာတွေ့ခဲ့ရသည်။
1/28/2012 10:23:00 AM
ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးနှင့် မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော်တို့မှ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးတဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ မသန်းမစွမ်းသူများအား တရားဟောကြားပွဲ
ရွှေညဝါ ဆရာတော်၊ မေတ္တာရှင် ဆရာတော်တို့အား ဒုက္ခိတ မသန်မစွမ်းသူများမှ ဖူးမြော်ကြည်ညိုနေစဉ်..
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက်နေ့က ကြည့်မြင်တိုင် သာဓုကျောင်းတိုက်မှာ ရွှေညဝါဆရာတော် ဦးပညာသီဟနှင့် မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော်ဦးဇဝနတို့မှ ဦးစီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဘဝကံအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒုက္ခိတဖြစ်နေရတဲ့ မသန်မစွမ်းသူများအား တရားဟောကြားပွဲ အခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်...။ အဆိုပါနေ့က ကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်ရှိလာကြတဲ့ ဒုက္ခိတ မသန်မစွမ်းသူများအား အားပေးစကားများ ပြောကြားခဲ့ပြီး တရားရေအေး တိုက်ကြွေးခဲ့ပါတယ်...။ မသန်းမစွမ်းသူတွေလည်း တရားရေအေးနာကြားခွင့် ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်ဆိုပါတယ်..။
အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ် ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက (၁၀)ပါးသာ သိရှိတဲ့ ၄၇ပါးစုံညီ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၁လအတွင်း ကျောင်းတိုက်မှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေးခြင်း ခံနေရပါတယ်..။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးစံအရ ထေရ်ကြီးဝါကြီးများအား အပြစ်ရှိကြောင်း တောင်းပန်ပါက.. ခွင့်လွှတ်ကြေအေးရတဲ့ မေတ္တာတရားကို အခြေခံတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်လာ ဟောကြားချက်များ ရှိပေမယ့် ရွှေညဝါဆရာတော်အား လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး မန္တလေးအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ သြဝါဒပေးမှုနဲ့ ကျောင်းတိုက်မှ ထွက်ခွာရန် ဖိအားပေးခြင်း ခံနေရပါတယ်..။ အစိုးရ ကြံ့ဖွံ့ရုံးများမှာ တရားဟောကြားပါက မည်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်ကိုလည်း ပြည်သူအများမှ သိရှိလိုကြပါတယ်...။
ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးအား ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယကာအဖြစ် သတ်မှတ် လှူဒါန်းမည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်..။ ထို့အတူ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)ဦးဇဝန၊ ဒယ်အိုးဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလတို့ အားလည်း မြန်မာပြည်တွင်း တရားဟောကြားခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်း ခံနေရပါတယ်...။ ဒီမိုဝေယံ သစ်ထူးလွင်
1/28/2012 10:12:00 AM